Impela Yesilinganiso Esilawulwa Ngokufanele Impompo Yokumnika Kanye ne-Syringe Pump Kusuka eSunbright
Umthamo ongafanele womuthi osetshenziswa ngabahlengikazi basesibhedlela uvame ukuholela ezingozini ezinkulu zezokwelapha. Ngakho-ke, i-Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co., Ltd. yethule impompo lokumnika isirinji elonga ukonga okungumpompo wokumnika i-SUN-900 nepompo yesirinji i-SUN-500 ...Funda kabanzi »
ISunbright Yethule Ngokukhulu I-Pixiu Series Of Patient Monitors
Isikhathi Iposi: Sep-27-2020
Ukuqapha kwesiguli kwezokwelapha kuyithuluzi noma uhlelo olulinganisa futhi lulawule amapharamitha womzimba wesiguli, futhi odokotela bangaqhathanisa nenani lesethi elaziwayo, kuzokukhumbuza uma kudlula umkhawulo. Ngokwesakhiwo, ihlelwe ngezigaba ezine ...Funda kabanzi »
I-Era Entsha Iqala Kusuka eSunbright Decade Carnival
Ukuqapha isiguli i-Multipara kungumshini wezokwelapha noma uhlelo olulinganisa futhi lulawule imingcele yomzimba yesiguli, futhi ingaqhathaniswa nenani elibekiwe, futhi ingathumela i-alamu uma yeqa umkhawulo. Manje sesinokuqapha okusha kokuphindaphindeka okusha okusha: ...Funda kabanzi »
Umshini we-Sunbright High Quality ECG: Isimiso Sokufaka Umsebenzi
I-ECG ubuchwepheshe obusebenzisa i-electrocardiograph ukuqopha ushintsho emsebenzini kagesi wenhliziyo phakathi nomjikelezo ngamunye wenhliziyo ovela ebusweni bomzimba. Izici Iziteshi ezahlukahlukene ziyatholakala: i-3-channel ECG, i-6-channel ECG 7 inch color LED display touch screen S ...Funda kabanzi »
Isayensi Edumile: Uyini umshini we-ultrasonic?
Noma ngabe ukuhlolwa kwezempilo noma ukuvakashelwa esibhedlela, udokotela uhlala ebuza isiguli ukuthi sihlolwe nge-ultrasound. Ukuqonda kwabantu abaningi ngomshini we-ultrasound kusetshenziselwa ukuhlola abesifazane abakhulelwe. Eqinisweni, umshini we-ultrasound awusetshenziswanga kuphela ukukhulelwa ...Funda kabanzi »
Iminyaka Eyishumi Yenkemba: Umshini We-Sunbright Ultrasound Cabanga Ngaphezu Kwakho
I-SUN-906A / B / C chungechunge ngumkhiqizo ozimele nowokuthuthukiswa komkhiqizo yi-Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co, Ltd. Ngesikhathi semvula, ukupholisha njalo nokuhlolwa komtholampilo, selokhu kwethulwa i-SUN-906A / B / C chungechunge, uzuze udumo oluphakeme ...Funda kabanzi »